Ubuciko nokuzijabulisa, Indawo yaseshashalazini
Umqondisi oqhakazile nesibindi futhi u-Andrei Zhitinkin uthi i-credo yakhe yokudala ngegama elithi "inkululeko", ekukhiqizeni kwakhe ukhetha izindlela ezinjengalezi eziveza ukuthi zingavusa imizwelo eqinile ezilalelini. Imisebenzi yakhe ayinandaba, uhileleka ekusebenzeni, futhi abantu bayothandana naye kuze kube phakade, noma banqabe ngokweqile ukuhleleka kwakhe. Kodwa lokhu okuncane kuncane kakhulu.
NgoNovemba 18, 1960 eVladimir kwavela uZhitinkin Andrei Albertovich. Ngesikhathi esemncane, wayephupha ekubeni ngumdlali, wayenethalente elihle. Wayethanda ukufunda futhi emva kwesikole wayefuna ukungena esikoleni se-Moscow State University. Ngemva kokuphothula esikoleni, u-Andrew waya eMoscow futhi, ehamba edolobheni, wafika esikoleni eShchukin. Ekhumbula amaphupho abantwana, wafaka izincwadi ngokuzenzekelayo futhi wangena emnyangweni owenzayo. Wakwazi ukwenza kalula lokho abaningi abafake khona abachitha iminyaka eminingi. Ofunda nabo kwakungu-Evgeny Dvorzhetsky, u-Evgeny Knyazev, uVera Sotnikova, u-Irina Malysheva. Emisebenzini yokuqeqeshwa uZhitinkin wabonisa ithalente elingenakuphikwa, waphothula ekolishi nge-diploma ebomvu futhi wamenywa emidlalo yezemidlalo yaseVakhtangov, efakazela ngethalenta elibi likaAndrey. Lapho wasebenza kanye noMikhail Ulyanov noYuro Yakovlev. Lapho esebenza unyaka emidlalo yaseshashalazini, wayenengxoxo enhle noJevgeny Simonov, umqondisi omkhulu weTheatre. Vakhtangov. Ucele u-Andrei ukuba ahambe esikoleni somqondisi, ethi uyabamba inkundla yokugcina. UZhitinkin wangena esikoleni uSimonov, kwakunabantu abayisithupha kuphela kuleli qembu. Kuze kube manje, uZhitinkin ungumfundi wokugcina womqondisi ovelele, esebenza eMoscow. Abanye abafunda nabo u-Andrew bahamba kuleli zwe basebenza kwezinye izindawo. Ngo-1988, uZhitinkin waphumelela emnyangweni oqondisayo wesikole saseShchukin futhi waphinde waqokelwa i-diploma ebomvu, wamenywa eSovremennik - enye yezindawo zokudlala eziseMoscow.
Umsebenzi we-actor kuncane kakhulu. Ngonyaka wokuqala ngemuva kwesikole, lapho esebenza eVakhtangov Theater, kanye noJoor Yakovlev, wadlala ngokuqhuma ngomdlali oguga. Ngemuva kwalokho, uZhitinkin washiya umsebenzi wakhe isikhathi eside, nakuba bonke abaculi abasebenza nabo bephawula ukuthi wabonisa ngokucacile ukuthi yingxenye yendima. Ekuqaleni kwawo-2000, wadlala indima eminingana, kuhlanganise neLuchino Visconti.
Ngemva kwesikole, u-Andrei Zhitinkin waya eSovermennik Theatre. Lapha, wathi, ufunde ku-intando kaMqondisi weGalina Volchek, ikhono lokuqondisa bonke abasebenzi bezemidlalo: kusukela ku-actor kuya ku-illuminator. Kuhlelo lokudala nale ndawo yokudlala, wayengenalo lucky ngokuphelele. Kwaphela iminyaka emithathu yonke imisebenzi kaZhitinkin yayingavunyelwe. Waya e-Ermolova yaseshashalazini, lapho aqala khona ukusebenza kwakhe, ngakho iminyaka eminingana waya enkundleni yemidlalo eMalaya Bronnaya, futhi kamuva - indawo yakhe yaseshashalazini. Kodwa i-geography yemikhiqizo yakhe yayihlanganisa cishe umhlaba wonke. Wasebenza kuzo zonke izindawo zokudlala ezisezingeni eliphezulu eMoscow, wamenywa ukuba akhulume phesheya. Kodwa ngaphezu kwakho konke uthanda inhloko-dolobha yaseRussia, ngaphandle kokuthi uyathukuthela futhi ngubani oyishukumisayo.
Wakwazi ukusebenza nazo zonke izinkanyezi ezidumile zesigaba saseRussia: Innocent Smoktunovsky, uLyudmila Gurchenko, u-Alexander Shirvindt, uGeorgy Zhzhenov, uLyubov Polishchuk, uSergey Bezrukov, uMikhail Kazakov, uVera Vasilyeva nabanye abaningi. Kodwa isici sikaZhitinkin njengomqondisi ukuthi akasebenzi nje kuphela izinkanyezi, kodwa futhi uheha abasha abadlali abancane. Ufuna ukukhombisa abaculi emisebenzini ye-atypical kubo, uthola izinto ezithakazelisayo kubo.
U-Andrei Zhitinkin waqhamuka e-cinema, wayenamafilimu amabili e-akhawuntini yakhe. Kodwa indawo yaseshashalazini isala uthando lwakhe oluyinhloko empilweni.
Ngo-1999, uZhitinkin Andrey Albertovich wanikezwa isihloko soMhlonishwa ohlonishwayo waseRussia Federation.
Indlela kaAndrei Zhitinkin
Umqondisi u-Andrei Zhitinkin unobuntu obudala obudala. Isici sakhe esiyinhloko njengomqondisi isibindi. Akesabi ukusebenzisa amasu emkhakheni walokho okuvumelekile. Ukhombisa umzimba omningi we-naked, i-obscene nesangulu, amasu acasulayo. Kodwa konke lokhu kungenxa ye-aesthetics yakhe, ngakho-ke ayibangeli ukuthuthumela noma ukuthuka kumbukeli.
Namuhla singasho ukuthi i-"Theatre's Theater ka-Andrey Zhitinkin" yakhiwa, futhi lokhu akuyona nje ukubizwa kwendlela yokudala yomqondisi, kodwa futhi negama leqoqo lezemidlalo ngaphansi kobuholi bakhe.
U-Andrei Zhitinkin uye wenza imisebenzi engaphezu kwezingu-70, eziningi zazo zibalulekile. Abahlaziyi abahle kakhulu kubandakanya ukusebenza: "Umngane othandekayo" no "Nijinsky. I-Crazy God iyangena "e-Mossovet yaseshashalazini," Impi emva kokunqoba kungokwalabo abaphangi "emidlalo yaseshashalazini," Psycho "eTabakerka," Isithombe seDorian Gray "," Caligula "," Ukuqashelwa komuntu ovelele uFeliksi Krul "emsebenzini wakhe.
Kukhona abadumi abavikela ngokucophelela indawo yabo yangasese, kuhlanganise no-Andrei Zhitinkin, obani ukuphila kwakhe kwangasese kuyisimo sabo bonke. Umqondisi uthi impilo yakhe yangasese iyindawo yaseshashalazini. Ukhulu kakhulu futhi ngothando olukhulu usebenza, futhi ngisho nasephusheni ubeka ukusebenza. Kuyaziwa ukuthi umqondisi ushadile, kodwa ukhetha ukungamemezeli umkakhe. Esikhathini esingavamile esingavamile uZhitinkin ufunda okuningi futhi yena ubhala kancane, waze wabhala nezincwadi ezimbili: "Playboy esiteji saseMoscow" (mayelana nezimfihlo zomsebenzi womqondisi) kanye ne "99" (iqoqo lezinkondlo).
Ithebula "Operetta yaseMoscow": umlando, irepertoire, igundane, ukubuyekezwa
Isaladi okumnandi nge uphayinaphu noshizi futhi inkukhu.
Ukuhlanza melamine isipanji: ukubuyekezwa kanye incazelo